Mai Sekai Holland Vocherechedza Zuva Revanhukadzi Nemibvunzo
Pasi rose richange richicherechedza zuva revanhukadzi kana kuti International Women’s Day neMugovera. Masangano akawanda achange achicherechedza zuva iri nezvirongwa zvakasiyana siyana. Dingindira yegore inoti "Ending Impunity for Violence Against Women and Girls". Hurongwa hwezuva iri hunoitika apo nyika dzemu Africa dzakatarisana nezvipingaidzo zvakawanda, izvo zviri kuvhiringidza kubudirira kwevanhukadzi pamwe nevanasikana. Vanhukadzi vemu Africa vanodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana, asi huwandu hwavo huuratidzi zvakanaka pamabasa epamusoro anoitwa nevanhukadzi.
Vezvematongerwo enyika vanoti vari kuedza zvikuru kusimudzira vanhukadzi munyaya dzezve matongerwo, kuburikidza nekuvapa zvigaro vasina kukwikwidzwa nevanhurume. Vanhukadzi pachavo vanoti iri idanho rakanaka, kunyange hazvo pavari kuda chaipo vasati vasvika. SADC inokurudzira kuti vanhukadzi vange vaine zvigaro zvakawanda sezvevarume mudare reparamende. Asi zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti vanhukadzi vachine mutoro mukuru wekuti zvido zvavo zvazadziswe.
Vamwewo vanoti hapafanirwe kuva nerusarura pakati pevanhurume nevanhukadzi munyaya dzezve matongerwo enyika, nokudaro varume nevanhukadzi vanofanirwa kukwikwidza vose zvigaro, vanhu vosarudza munhu wavanoda.
Muhurukuro pamusoro penyaya iyi, Jonga Kandemiiri weStudio 7, abata Amai Sekai Holland, munyori anoona nezvehurongwa negwara mubato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, pamwe naVaPedzisayi Ruhanya, programmers officer weCrisis in Zimbabwe Coalition, avo vanoti vanhurume vanofanirwa kudzidziswawo nezvekodzero dzevanhukadzi, kuitira kuti vazivewo kuti munhukadzi munhu.